Date My Pet » Manàna nahataratara? Ity Ahoana no aoka ho fantany
Last nohavaozina: Dec. 03 2020 | 2 min namaky
Isika rehetra dia efa niaina izany, ny lolo eo amin'ny kibony, rehefa mahita azy manerana ny efitrano; Fohy ny androm-fofonaina rehefa miborosy lasa ny hanorotoro na hijoro akaiky lehilahy na vehivavy ao amin'ny ascenseur; bebe kokoa ny fo ny tahan'ny ny fitaovam-piadiana rehefa mahia amin'ny tsirairay ao amin'ny sarimihetsika teatra. Ireo rehetra ireo dia famantarana fa lavo ny olona. Ny fahafantarana izany dia mora, fa namela olona mahalala ny fihetseham-ponao no sarotra kokoa. Ireto misy fomba vitsivitsy Soso-kevitra ny hanorotoro fa fa mitombo ny fihetseham-po mihoatra noho finamanana sy ny ho fantatra raha toa ka mahatsapa izany koa.
Ny marina Fomba Fiasa
Ny fomba tsotra indrindra dia ny maka bahana sy spill ny tsaramaso ho azy mivantana. Namela fotoana fotsiny izay afaka ny hanorotoro irery, ka lazao azy ny tena fihetseham-pony ary anontanio raha mahatsapa izany koa. Ho nametraka izany rehetra izany avy amin'ny tsipika ary mety mametraka ny tenanao ho fandavana avy hatrany, fa izany no fomba haingana hahazoana izany rehetra eny an-tratra. Ity fomba ity maka vola be ny tena misy vidiny, na izany aza. Raha toa ianao ka tsy hatoky tena superhero, angamba fomba an-kolaka kokoa ho tsara indrindra.
Ampitomboy ny Flirt Factor
Ny fomba tsara mba hahatsapa ny mety hisian'ny namana ho mihoatra noho ny namana dia ny ho lasa flirtier tsikelikely ny zavatra ny fitiavana. Mitsiky be dia be, fanaovana maro ny masony, tsindraindray Wink sy haingana, maso tsy miankina raha amin'ny toerana ara-tsosialy dia afaka manome ny hanorotoro famantarana an-kolaka fa ianao manome azy ireo bebe kokoa noho ny hafa. Raha mandoa vola manokana ny hanorotoro ny olona hafa mampiseho ny hanorotoro fa manana fihetseham-po manokana ho azy.
Get More Ara-batana
Raiso fahafahana izay azonao atao mba hanampiana sy hikasika ny hanorotoro. Aza, I donít hoe nanafika ny toerana sy ny fanaovana azy ireo tsy mahazo aina. Simple fahafahana hikasika ny sandriny na ny tanany rehefa manao resaka. Omeo ny hanorotoro ny mamihina, rehefa nanao hoe: veloma na miarahaba ny tsirairay. Mandona azy ireo amin'ny fomba flirty vazivazy aminy rehefa miankina amin'ny akaiky izy ireo, rehefa milaza aminao tantara iray na miafina. Nitombo physicial fifandraisana dia fomba tsara handao hamantatra izany fa te ho akaiky kokoa azy, fifandraisana samy hendry, sy ara-batana.
Aoka ho nahavokatra Amin'ny Compliments
Atombohy ny hanorotoro complimenting rehefa mahazo-hihety volo na manao akanjo tsara tarehy. Izany dia tsy hahatonga ny hanorotoro hahatsapa tsara ny tenany, fa aoka ihany koa izy ireo hahafantatra ny hevitrao izy ireo manintona. Ny fanaovana fanehoan-kevitra toy ny ìyou lehibe toy izany fahatsapana humorî, rehefa hanorotoro ny manao vazivazy na ìyou dia izany smartî rehefa miresaka momba ny olana lehibe dia fomba tsara hamela ny hanorotoro mahalala tena toa azy ireo.
Tsy misy tetika dia foolproof, ary mety mbola mitaky anao fisaka avy milaza ny hanorotoro ny fihetseham-ponao raha donít mahazo ny Soso-kevitra, fa afaka hanampy anao hahazo ny heviny ny fomba tsara kokoa ny hanorotoro tsapany momba anao. Akory va ireo paikady, dia zava-dehibe ny mamaky ny crushís valin-. Raha mamaly ny soso-kevitrao na zavatra amin'ny alalan'ny fahazoana menatra na sosotra, Mety ho izy koa mahatsapa donít momba anao. Raha mamaly ny filalaovana fitia bebe kokoa ny filalaovana fitia, fa famantarana tsara izy ireo hanorotoro amin'ny anao koa.